संक्रमित आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउँदा कोरोना सर्छ ?
कोरोना पोजिटिभ आमाले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउँदा बच्चामा संक्रमण सर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा मानिसहरूमा धेरै अन्योल छ। यसलाई हटाउन हालै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले एउटा अनुसन्धान गरेका छन् । जसमा संक्रमित महिलाबाट स्तनपान गराउँदा बच्चामा भाइरस सरेको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएका छन् । यो अनुसन्धान पेडियाट्रिक रिसर्च जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार आमाको दूधमा कोरोना
भाइरसको आनुवंशिक तत्व निकै कम मात्रामा पाइन्छ । यद्यपी, यस सामग्रीबाट भाइरसले स्तनपान गराउने बच्चालाई गुणा र संक्रमित गर्न सक्छ भन्नेबारे कुनै क्लिनिकल प्रमाण फेला परेको छैन।
यस अनुसन्धानमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले ११० जना महिला स्वयंसेवकको स्तनको दूधको परीक्षण गरेका थिए । यी आमाहरूले विश्वविद्यालय अनुसन्धानको लागि आफ्नो नमूनाहरू दान गरे। तीमध्ये ६५ महिला रक्तदान गर्दा कोरोना संक्रमित भएका थिए । सोही क्रममा ९ जना महिलामा भाइरसको लक्षण देखिए पनि उनीहरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । यसबाहेक लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगर्ने ३६ जना महिला थिए ।
वैज्ञानिकहरूले ११० नमूनाहरू मध्ये ७ मा, अर्थात् ६ प्रतिशत स्तनपान गराउने महिलाहरूमा कोरोना भाइरस सार्स कोभिड-२ को मूल रूपको आनुवंशिक सामग्री फेला पारे। यी महिलाहरु या त कोरोना संक्रमित थिए वा उनीहरुमा भाइरसको लक्षण देखिएको थियो ।
अनुसन्धानको दोस्रो चरणमा अन्वेषकहरूले यी ७ महिलाबाट पुनः आमाको दूधको नमूना लिएका थिए । १ देखि ९७ दिनको बीचमा लिइएका यी नमूनाहरूमा कोरोनाको आनुवंशिक सामग्री फेला परेन। यसको सीधा मतलब यो हो कि भाइरस स्तनको दूधमा बढेको छैन।
अनुसन्धानका प्रमुख वैज्ञानिक पल क्रोगस्टाड भन्छन्, ‘बालबालिकाका लागि आमाको दूध पोषणको ठूलो स्रोत हो। अनुसन्धानमा हामीले कोभिड–१९ बाट संक्रमित आमाको स्तनको दूधमा कोरोना भाइरस धेरै गुणा हुने प्रमाण फेला पारेनौँ। यसले बच्चाहरूलाई सङ्क्रमण गरेको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन, जसले उनीहरूलाई स्तनपानबाट जोखिममा नरहेको बताउँछ।’
कोरोना पोजेटिभ भएमा कसरी स्तनपान गराउने ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यस्ता महिलाले बालबालिकालाई स्तनपान गराउने तर केही सावधानी अपनाउन सक्ने बताएको छ । उदाहरणका लागि आफ्नो वरपरका चीजहरू कीटाणुरहित गर्नुहोस्, बच्चालाई काखमा लिनु अघि साबुन-पानी वा सेनिटाइजरले हातहरू सफा गर्नुहोस् र मास्क लगाउनुहोस्।
विज्ञहरूका अनुसार धेरैजसो आमाले बच्चालाई स्तनपान मात्रै आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझ्छन् तर त्यस्तो होइन । यसबाट आमाहरुलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । उदाहरणका लागि डेलिभरी पछि बढेको तौल नियन्त्रण हुन थाल्छ। यसले मधुमेह, मुटु रोग र क्यान्सर जस्ता रोगको जोखिम पनि कम गर्छ । यी बाहेक, भविष्यमा ओस्टियोपोरोसिस र गर्भावस्था पछि रगत बग्ने जोखिम पनि कम हुन्छ।